आलो र पालो- विविधा - कान्तिपुर समाचार
असार ७, २०७६ विमल निभा
काठमाडौँ — वास्तवमा कुरो के हो भने आलोपालो कुर्सीमा बस्ने सहमति भएको थियो । यो गोप्य प्रकारको सहमति थियो । त्यसैले फ्याट्टै खुला भयो । यदि गोप्यको साटो खुला सहमति भएको भए के हुन्थ्यो ? केही पनि हुँदैनथ्यो । किनभने खुलालाई फेरि के
खुला गर्ने ?
यही आलोपालोको आलो बिहानैदेखि विचार गरिरहेको थियो । उसको विचारको केन्द्रीय भागमा एकथान कुर्सी थियो । अर्थात् के गरी आलोपालोको पालोलाई कुर्सीमा बस्न नदिने ! किनभने खुला भएको गोप्य सहमति बमोजिम पालोको कुर्सीमा बस्ने पालो आएको थियो । र आलोपालोको आलोको पालोलाई कुर्सी छाड्ने कुनै विचार थिएन ।
‘सरकार के भयो ?’ उसको प्राइभेट सेक्रेटरीले आएर सोध्यो ।
‘किन, के भयो ?’ आलोले उल्टै ऊसँगै सोध्यो ।
‘बिहानैदेखि चुपचाप हुनुहुन्छ सरकार ।’
‘म चुपचाप छैन ।’
‘सरकारले बिहानैदेखि केही बोल्नुभएको छैन ।’
‘हो र ?’ आलोले मानौ आफैंसित भन्यो ।
‘म बिहानैदेखि हेरिरहेको छु, सरकार चुपचाप कुर्सीमा बसिरहनुभएको छ ।’ प्राइभेट सेक्रेटरीले थप्यो ।
‘बिहानैदेखि चुपचाप बसिरहेको छु म ?’
‘हो, बिहानैदेखि चुपचाप सरकार ।’
यसपछि आलोपालोको आलोले केही भनेन । त्यसैगरी चुपचाप कुर्सीमा
बसिरह्यो । यो चुपचापपन निकै लम्बिएकोले प्राइभेट सेक्रेटरीले विस्तारै भन्यो, ‘सरकारलाई केही अप्ठ्यारो छ कि ?’
‘मलाई के अप्ठ्यारो हुन्छ ?’ आलोले प्राइभेट सेक्रेटरीतिर हेरेर भन्यो ।
‘त्यही त, सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो ।’
यसको प्रत्युत्तरमा आलो फेरि विचार गर्न थाल्यो । उसले दुवै आँखा चिम्लेको थियो । केही बेरपछि खोलेर भन्यो, ‘अब तिमीले सोधिहाल्यौ, (केही क्षणको मौन), हेर, कुरो के हो भने पालोको कुर्सीमा बस्ने पालो आयो ।’
‘हो र सरकार ?’ प्राइभेट सेक्रेटरी झस्कियो ।
‘हुन त हो, तर म कुर्सी छाड्न चाहँदिन ।’
‘त्यसो भए, के गर्ने त सरकार ?’
‘त्यही त, अब के गर्ने भनी विचार गरिरहेको छु ।’
एता आलो विचार गरिरहेको थियो भने उता आलोपालोको पालो पनि त्यसै बसेको थिएन । ऊ पनि बिहानैदेखि विचार गरिरहेको थियो । र उसको विचारको केन्द्रमा पनि उही कुर्सी थियो । अर्थात् के गरी कुर्सीमा बस्ने ! यसमा मुख्य समस्या के थियो भने कुर्सीमा आलोपालोको आलो बसेको थियो । र आलो कुर्सीमा बसिरहेसम्म पालो कसरी कुर्सीमा बस्ने ?
‘के भयो हजुर ?’ पालोको सल्लाहकारले सोध्यो ।
‘तिमीलाई थाहै छ ।’ पालोले निधार खुम्च्याएर भन्यो, ‘अहिले कुरो के हो ?’
‘के हो हजुर ?’ सल्लाहकारले अनजान भावमा भन्यो ।
‘यही, कुर्सीमा कसरी बस्ने ?’
‘ए, कुर्सीको कुरो हो ।’
‘अरु के हुन्छ त ?’
‘हजुर, कुर्सीमा बस्ने एउटै उपाय छ ।’ सल्लाहकारले सल्लाहको मुड बनायो ।
‘के उपाय छ ?’ पालोको जुंँगा चल्यो ।
‘उपाय सिम्पल छ, हजुर ।’
‘भन न त, के उपाय छ ?’
‘हजुर कुर्सी वरिपरि उभिइरहनुपर्‍यो ।’ सल्लाहकारले सल्लाह दियो, ‘र आलो कुर्सीबाट उठ्नासाथ झट्ट त्यसमा
बस्ने हजुर । ’
पालो र उसको सल्लाहकारको यस्तो कुरो चलिरहेको बखत आलो र उसको प्राइभेट सेक्रेटरीको संवाद भने चरममा पुगेको थियो । यही कुराकानीको सिलसिलामा आलोले प्राइभेट सेक्रेटरीसँग भन्यो, ‘पालो कुर्सीमा बस्न खोजिरहेको छ ।’
‘यो मिल्दैन हजुर ।’
‘कसरी मिल्दैन ?’
‘सरकार कुर्सीमा रहेसम्म पालो कसरी कुर्सीमा बस्ने ?’ प्राइभेट सेक्रेटरीले भन्यो, ‘यो मिल्दै मिल्दैन ।’
‘यो त हो ।’ आलोको मिहिन स्वर लर्बरायो, ‘तर पालोले मेरो कुर्सीमा बस्ने पालो हो भनिरहेको छ ।’
‘यसरी भनेर के हुन्छ, सरकार ?’
‘अनि के गर्ने त ?’
‘सरकार कुर्सीबाट उठ्दै नउठ्ने नि !’
‘यो कसरी हुन्छ ?’
‘किन, के गाह्रो छ, सरकार ?’
‘हेर, मैले नित्यकर्म गर्नुपरेन ? सधैं दाँत माझ्नैपर्‍यो । दिसा–पिसाब नगरी भएन । अलिकता यताउता हिंँडडुल गर्नैपर्‍यो । अनि राति ओछ्यानमा गएर सुत्नु परेन ?’ आलोको भुक्क गाला अरु भुक्क भयो, ‘कुर्सीमा बसिरहेर सबै कसरी गर्ने मैले ?’
‘त्यसो भए, के गर्ने त सरकार ?’ प्राइभेट सेक्रेटरी चिन्तित भयो ।
‘त्यही त, के गर्ने ?’
‘केही न केही त गर्नैपर्‍यो, सरकार ।’
‘हो, नगरिकन भएन ।’ आलोको स्वरमा पनि चिन्ता थियो ।
यो समस्या गम्भीर भएकोले सोही खालको समाधान जरुरी थियो । त्यसैले आलोपालोको आलो र उसको प्राइभेट सेक्रेटरी गम्भीर रूपमा विचार गर्न थाले । केही समयपछि आलोले दह्रोसाथ कुर्सी समातेर भन्यो, ‘म यो कुर्सीबाट उठ्दै
‘हो सरकार, कुर्सीबाट उठ्नु भएन ।’
‘अबदेखि म खानपिनदेखि लिएर दिसा–पिसाबसम्म कुर्सीमै बसेर गर्नेछु ।’ आलोले दृढ आवाजमा भन्यो, ‘अनि हेरुँ त, त्यो पालो कसरी कुर्सीमा बस्नेछ ?’
‘यसरी कुर्सीमा दिसा–पिसाब गर्दा सरकारलाई गाह्रो हुँदैन ?’
‘गाह्रो भए पनि कुर्सीका लागि गर्नैपर्‍यो ।’ आलोको स्वर भारी भयो, ‘नत्र पालो
कुर्सीमा बस्नेछ ।’
‘ठीक भन्नुभयो सरकार ।’
‘बेठीकको कुरै छैन ।’
यसपछिको कुरो के हो भने आलोपालोको आलो कुर्सीमा बसेको बस्यै छ । त्यसबाट पटक्कै उठेको छैन । र पालो पनि कुर्सी वरिपरि उठेको उठ्यै छ । कारण, कुनै न कुनै बेला आलो कुर्सीबाट कसो नउठ्ला त !
प्रकाशित : असार ७, २०७६ ०७:३६
‘योग नेपालबाट फैलियो’
असार ७, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
चितवन — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले योग नेपालबाट विश्वभर फैलिएको बताएका छन् । उनले योग ऋषि पतञ्जली पनि नेपालमै जन्मेको तथ्य पत्ता लागेको जानकारी गराए । शुक्रबार भरतपुरमा आयोजित योग दिवसमा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले बताएका हुन् ।
पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका सन्दर्भमा पतञ्जली योग समिति चितवन शाखाले भरतपुरको प्रहरी तालिम केन्द्रमा योग शिविर आयोजना गरेको थियो । उपराष्ट्रपति पुनले नेपालको हिमालय क्षेत्रबाट फैलिएको योग र शिक्षालाई आज संसारभरका मानिसले अंगिकार गरेको बताए । ‘नेपालबाट फैलिएर अन्तर्राष्ट्रियजगत्ले स्वीकार गरेको र संयुक्त राष्ट्रसंघको ६९ औं महासभाले जुन २१ लाई विश्व योग दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा विश्वभरका योग अनुरागीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु,’ उनले भने । योगले मानिसलाई रोग लाग्नबाट बचाएको र आत्मिक शान्ति दिएर सुखी बनाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
‘प्राथमिक तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्म योगलाई पाठ्यक्रममा राख्ने यसअघि सुरु भएको प्रयासलाई सार्थकता दिन म सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उपराष्ट्रपति पुनले भने । पुनले भरतपुरमा आयोजना भएको कार्यक्रमको उद्घाटन र योग पनि गरे । ‘योग शिक्षालाई अझै प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । नागरिकहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ भए मात्रै देश स्वस्थ हुन्छ । अनि मात्रै हामीले भनेजस्तो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको चाहना पूरा हुन्छ,’ पुनले जोड दिए ।
प्रकाशित : असार ७, २०७६ ०७:३४